I-Apple ibhengeza iiPodcasts ngeNkonzo yoBhaliso | Ndisuka mac
I-Apple ibhengeza iiPodcasts ngeNkonzo yokuBhalisa
Kusemthethweni. U-Apple uwuqalisile umsitho wasentwasahlobo ngo-Epreli 20 ethetha ngeenkonzo zenkampani yaseMelika. Into yokuqala ebhengezileyo yile Ukubhaliswa kwePodcast. Inkonzo izakuhamba bukhoma ukuqala kwinyanga ezayo kwaye iya kuvumela abaphulaphuli ukuba baxhase ngokuthe ngqo ii-podcasters ngokusebenzisa i-Podcasts.
U-Apple uqalise i-adventure yomsitho wasentwasahlobo kwakhona kwifomu ebonakalayo ngokuhamba ukusuka kwi-CEO yakhe nge-Apple Park, ebhengeza iinkonzo zenkampani. Enye yazo yinkonzo yePodcasts. Imicimbi emitsha eqala kwinyanga ezayo, Inyanga kaMeyi.
Ukubhaliselwa kwii-Apple Podcasts kuya kufumaneka kubaphulaphuli ngaphezulu kwamazwe e-170 kunye nemimandla ngoMeyi. Iimfuno zesoftware ethile yeApple Podcasts kunye nemijelo ziya kwabelwana ngayo kungekudala.
Amaxabiso obhaliso ngalunye isethwe ngabadali kwaye zihlawulwa rhoqo ngenyanga ngokungagqibekanga. Ukongeza, abadali banokunika intlawulo yonyaka, ababhalisi abanokuyilawula kuseto lweakhawunti ye-ID ye-Apple, ngoku enokufikelelwa ngoku Mamela ngoku. Abaphulaphuli baya kuba nakho ukufikelela kwiimvavanyo zasimahla kunye neziqendu zesampulu ezinikezelwa ngabadali.
Ngu Ukwabelana nosapho, ukuya kuthi ga kumalungu osapho amathandathu anokwabelana ngomrhumo. Ukongeza, abaphulaphuli baya kuba nakho ukufikelela kwithebhu yokukhangela ephuculweyo kunye neetshathi eziphezulu kunye neendidi, uthotho olutsha kunye namaphepha esiqendu ngeqhosha le-Smart Play, kunye neziqendu ezigciniweyo kwi-iOS 14.5, i-iPadOS 14.5, kunye neMacOS 11.3. Iziqendu ezigciniweyo zikwakhona kwi-watchOS 7.4 kunye ne-tvOS 14.5. Olu hlaziyo lwesoftware luya kufumaneka kwiveki ezayo.
Inkqubo yeApple Podcasters, ebandakanya zonke izixhobo eziyimfuneko ukubonelela ngemirhumo yeprimiyamu kwiiApple Podcasts, iyafumaneka kubadali kumazwe angaphezu kwe-170 nakwimimandla kuyo yonke IRandi ye19.99 (USA) ngonyaka. Abadali banokubhalisela iNkqubo yeApple Podcasters namhlanje Ukusuka kwiApple Podcasts Qhagamshela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ibhengeza iiPodcasts ngeNkonzo yokuBhalisa